USA iyo Ethopia oo Is-kaashi buuxa ka samayey ka shaqeynta amaanka dalalka Qaarada Afrika – Radio Daljir
Luulyo 27, 2013 7:58 b 0
Adis-Abab, July 27, 2013 – Xukuumada Washington ayaa la shaakanaysa qorsheheeda horumarinta dhinaca amaanka Afrika dalka Ethopia, taas oo ka mid ah quwadaha ugu weyn ee Afrika, arintaasi waxaa shaaciyey ku xigeenka xog-hayaha arimaha difaaca Maraykanka oo booqday Adis-Ababa.
Waxaa la sheegay in dowladda Maraykanka ay kala tashatay arimaha amaanka dalal ka tirsan Afrika dalka Ethopia, iyadoo Maraykanka iyo xukuumada Adis ay isku raaceen in si mideysan ay u wada shaqeeyaan labbada wadan, si horumar dhinaca amaanka iyo xasiloonida ah loo gaarsiiyo dalal ka tirsan Qaarada.
?USA iyo Ethopia ?waxay iska kaashan doonaan oo ay wadaageen muhiimada wadamada Africa ee dhanka amaanka waxaana sii wadi doonaa sidii aan wadajir uga shaqeyn laheyn isbedelada dhanka amaanka ee wadamada Afrika? ayuu yiri Ash Carter oo ka war-bixiyey safarkiisii Ethopia.
Ku xigeenka Xog-hayaha arimaha difaaca ee US mr. Ash Carter wuxuu Ethpia kula kulmay Ra?isal wasaaraha dalkaas Hailemariam Desalegn iyo saraakiil kale oo uu ku jiro madaxa difaaca ciidanka qaranka Ethopia Gen. Samora Yenus, waxay aad uga arinsadeen arimaha amaan xumo ee dalal ka tirsan Afrika.
Ethopia iyo Maraykanka waxay soo hadal qaadeen sidii wax looga qaban lahaa xaaladooda dhanka amaanka ah dalalka Soomaaliya, Mali, Sudan iyo xitaa dalka Jamhuuriyad Africa Dhexe, Washington waxay walaac ka muujiyey qala-laasaha ka soo cusboonaaday jamhuuriyada Koonfurta Suudaan.
Maraykanka iyo dalka Afrikada Barri ku yaala ee Ethopia waxay ka wada xiriireen horumarinta iyo xiriirka labbada wadan ka dhexeeya, in kastoo dowladda Maraykanka sida ay sheegeen in ay aad ugala hadleen Ethopia sidii ay mar kasta u taageeri lahayd dalka Soomaaliya, iyo ka hortaga waxay ugu yeeraan Argagixisada ee gobolka jirta.